1. Ho an'ny mpampiasa Mac sasany izay mbola tsy mahalala ny fomba fakana pikantsary na miantso fotsiny hoe pikantsary. Ho an'ireo izay mitady fomba hisamborana pikantsary dia tsy maintsy mamaky ity lahatsoratra ity ianao .. Satria maka sary ny efijery fikandrana iray manontolo na ampahany amin'ilay efijery fotsiny Tsy dia sarotra araka ny eritreritrao! Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny Mac Iray amin'ireo lakilena manan-danja indrindra izay tsy maintsy ampiasaintsika ny: ● baiko ● famindrana ● isa 3 ● isa 4 ● isa 6 ● spacebar izay ampiasana ireo lakile ireo. Ary ahoana no fomba ahazoana azy amin'ny maodely Mac rehetra toy ny Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini. Andao hanohy amin'ny fomba sasany haka fakantsary. Iza amin'ireo no mila tsindrio miaraka aminao? Ary misy endrika ve ahafahantsika maka pikantsary?
2. Alao ny sary izay tadiavinao amin'ny alàlan'ny fanaingoana ny faritra misy azy. Tsindrio ary tazomy ny kaomandy Command sy Shift ary kitiho ny isa 4. Rehefa tsindrio miaraka amin'izay dia hampiseho famantarana + ny Mac anao, avy eo tsindrio ary tazomy ny totozy ary sintomy ny toerana irina Sary avy eo Rehefa vita ny toerana irina dia alefaso ny totozy, mety amin'ny fotoana tiana hisamborana toerana manokana. Rehefa maheno feo "snap" ianao dia midika izany fa vita ny fisamborana. Ny sary nalaina dia hotehirizina eo amin'ny birao avy hatrany.
3. Alao ny sarin'ny varavarankely ankehitriny. Raha te hanery sy hihazona ny bokotra Command and Shift dia tsindrio ny isa 4 ary afaho ny tanana rehetra. Arahin'i Spacebar (+ hiseho raha tsy tsindrio ny Spacebar) rehefa mamorona ny sarin'ny fakantsary. Tsindrio ny varavarankely tadiavina hisamborana ny sary, izay mety amin'ny fisintomana varavarankely manokana isaky ny fampiharana. Rehefa maheno feo "snap" ianao dia midika izany fa vita ny fisamborana. Ny sary nalaina dia hotehirizina eo amin'ny birao avy hatrany.
4. Makà pikantsary an'ny Mac iray manontolo amin'ny efijery feno Mba hanaovana izany, tsindrio ary tazomy ny kaomandy Command sy Shift, avy eo tsindrio ny isa 3. Ity dia hahafahana maka sary iray feno. Ny zavatra rehetra misokatra amin'ity efijery ity dia haseho avokoa. Mety raha te-hahita ny efijery iray manontolo ianao. Rehefa maheno feo "snap" ianao dia midika izany fa vita ny fisamborana. Ny sary nalaina dia hotehirizina eo amin'ny birao avy hatrany.
5. Makà sary iray amin'ny Touch Bar amin'ny MacBook Pro miaraka amin'ny Touch Bar, raha misy mampiasa MacBook Pro miaraka amin'ny Touch Bar, dia ho somary handroso izy io satria afaka maka pikantsary momba ny Touch Bar koa ny Mac !! Wow.Fomba fanerena sy fihazonana ny bokotra Command sy Shift ary tsindrio ny isa 6 rehefa maheno feo "Snap" ianao dia midika fa vita ny fisamborana. Ny sary nalaina dia hotehirizina eo amin'ny Desktop eo noho eo, teknika iray hafa dia ny manolo-kevitra fa raha te hanitsy ilay sary nalaina avy hatrany ianao dia azonao atao rehefa vita ny satrony, satria ny Mac dia hampiseho ny sary ho antsika alohan'ny hitahirizany azy amin'ny Desktop. Raha te hanoratra ianao na te hanisy marika ny teboka manan-danja Azo amboarina eo noho eo izy io, tena mety ho an'izay te hahalala teknika hafa amin'ny fampiasana Mac, aza adino ny manindry sy manaraka. Hamarino tsara fa manana teknika tsara be ianao!